Luis Figo Oo Magacaabay LIXDA Xiddig Ee Ugu Wanaagsan Dunida Waqtigan | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaLuis Figo Oo Magacaabay LIXDA Xiddig Ee Ugu Wanaagsan Dunida Waqtigan
Luis Figo Oo Magacaabay LIXDA Xiddig Ee Ugu Wanaagsan Dunida Waqtigan
Halyeygii hore ee reer Portugal ee Luis Figo ayaa soo xushay lixda ciyaartoy ee ugu wanaagsan dunida waqtigan ee isaga aragtidiisa, waxaana uu kusoo darsaday ruug-caddaayadii fagaareyaasha haystay 15kii sannadood ee ugu dambeeyey.
Luis Figo ayaa abaal-marinta Ballon d’Or ku guuleystay sannadkii 2000 oo ahayd xilli ciyaareedkiisii ugu dambeeyey Barcelona ka hor intii aanu u wareegin Real Madrid.
Laacibkan hore oo ka jawaabayay su’aalo toos looga weydiinayay baraha bulshada ayaa la weydiiyey ciyaartoyda ugu fiican dunida oo ay tiradoodu tahay lix, waxaanu markiiba lasoo booday Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi oo uu ka dhigay kaalinta koowaad iyo labaad.
Waxa kale oo uu liiskiisa kusoo daray xiddigaha PSG ee Kylian Mbappe iyo Neymar, kuwaas oo uu sii raaciyey Mohamed Salah oo Liverpool ah iyo Luka Modric oo isagoo ay da’diisu tahay 35 jir wacdaro ka dhigaya Los Blancos, ahaana laacibkii sannadkii 2018kii soo afjaray guulihii xidhiidhka ahaa ee Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ee abaal-marinta Ballon d’Or.
Ciyaartoyda uu Figo soo doortay ayay celceliska da’doodu noqonaysaa 30 sannadood iyo badh.
Isagoo si toos ah uga jawabaayey su’aasha ciyaartoyda ugu wanaagsan ayuu Figo yidhi: “Cristiano, Messi, Modric, Salah, Mbappe iyo Neymar.”
Arrinta cajiibka ah ayaa waxay tahay in Luis Figo aanu soo qaadin Robert Lewandowski oo ahaa laacibka haysta abaal-marinta FIFA Men’s Best Player ee sannadkii hore iyo laacibiinta Premier League ee Kevin de Bruyne iyo Bruno Fernandes, kuwaas oo uu sii raacayo Erling Haaland.
Lewandowski iyo Brune wala gartay lakiin Fernandez idinka jeebkiina miyaa logu soo daraa ileyn laacib hadii 1 season lagu noqonayo Carrol baa Ku Noqon Lahaaye.
Bruno Fernandes waqti xaadirkan waxa uu kamid yahey ciyaartoyda ugu wanaagsan.
Yusuf Ali Hundubey says:
Ronaldo io messi waa ku qaltanyay mpape io haalland aya iska leh 1 io 2